mid ka mid ah tareenka-xawaaraha sare ee Turkey ayaa awood u gaarey xawaaraha ugu badnaan aamusnaan dhex mariyey iriddii kadinka caasimada Ankara toddobaadkii la soo dhaafay. Tareenka ayaa soo maray Arifye markii ugu horeysay. Siidaynta hoggaamiyeyaasha ururka shaqaalaha mowduuca [More ...]
Türk-İş Madaxweynaha Ergün Atalay, 23. Caadiga ah shirka guud ee la qabtay ka dib booqashadii ugu horeysay ee Zaman cusub ee Turkey baabuur Industry Corporation TÜVASAŞ. Kulan guud oo lala yeesho shaqaalaha iyo wakiilada ururka shaqaalaha ee ka shaqeeya TÜVASAŞ [More ...]
Tareenka Xawaaraha Sare ee 300 Mileage wuxuu gaari doonaa Xawaaraha
Tareenka Xawaaraha Sare ee 300 wuxuu Gaadhaa Xawaaraha; mid ka mid ah tareenka-xawaaraha sare ee Turkey ayaa awood u gaarey xawaaraha ugu badnaan aamusnaan dhex mariyey iriddii kadinka caasimada Ankara toddobaadkii la soo dhaafay. 300 waxaa sameeyey Jarmal Siemens [More ...]
Demirtaş wuxuu helay macluumaad ku saabsan tareenka qaranka horumarsan; Wasiir ku-xigeenka Deegaanka iyo Wasiirka Qorshaynta Urban taxane ah oo dhacdooyin booqasho Sakaryay Mujahid Demirtas wadahadalo la booqashada Turkey baabuur Industry Inc. (TÜVASAŞ) [More ...]
Nidaamka of kala duwan dhaqdhaqaaq Road Tüvasaş ee Turkey baabuur Warshadaha / IIBSIGA WAAXDA u Xeelaysanayn goobta shaqada dhismaha wadooyinka ugu iibsiga badan Public Law No. 4734 19 curdan furan sida uu Qodobka [More ...]
Wasiirka Turhan ayaa kormeeray Warshadda ASAŞ
Wasiirka Turhan ayaa kormeer ku tagey Warshadda ASAŞ; Wasiirka Turhan, Warshadaha Madax-bannaan ee Warshadaha iyo Ganacsatada (MUSIAD) Xiriirka Dibloomaasiyadda MUSIAD Sakarya Laanta oo ay soo qabanqaabisay Shirka Wadamada Safiirada ee D-8 ayaa ka hadlay. Isgaarsiinta, xiriirka ganacsi waa mid aad u kacsan [More ...]
Laba Waddo oo Looyaqaan Nidaamka Tareenka Sakarya Go'aamiyay!
Laba Waddo Oo Lagu Go’aamiyay Khadka Nidaamka Tareenka Sakarya!; Isagoo ka hadlayey booqashadii uu ku tagay degmada Sakarya ee Magaalo Xeebeedka, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan wuxuu yiri, "Waxaan si dhaw uga qeyb qaadan doonnaa mashaariicda Sakarya. Sakarya wuxuu u qalmaa mashaariicda ugu wanaagsan [More ...]